Basal qurxin (Allium) waxaa lagu beeray beertii quruxda quruxda, waa mid u dhow, si uu u hadlo, qof qaraabo ah oo toon ah iyo basasha, oo lagu baddalay by taranta. Dunida waxaa jira qiyaastii 600 nooc oo basbaas ah. Basasha waa la cunaa, ubaxkuna waa ay ku faraxsan yihiin. Kuwani waa ubaxyo aan qabyo ahayn oo ubax ah muddo dheer.
Bal qiyaas cuno adigoon basasha aysan macquul ahayn. Waxyaabahan waxtar leh ee loo isticmaalo ku dhowaad dhammaan suxuunta: marka hore, labaad, dubista, caanaha, xitaa marmalade basasha waa la diyaarinayaa. Caleemaha huruudka ah ee cayayaanka Waxaa u muuqda in aysan jirin wax ka sahlan basasha sii kordhaya - kuwani ma aha yaanyo furik ah ama qandaraas shisheeye oo dibadda ah.
Waxay u egtahay, sababta aan u koraan basasha guriga, haddii khaanadaha dukaanka ee ku dhawaad ​​dukaanka, xitaa xilliga qaboobaha waxaad ka iibsan kartaa noocyo kala duwan oo cagaarka ah? Laakiin dhab ahaantii, casharkaan faa'iidooyin badan ayaa jira. Cagaarka guriga lagu kariyo waa ilo dheeri ah oo fiitamiino ah iyo nafaqooyin, waxay qurxineysaa cuntada cajiibka ah, marwalba waa mid cusub waana mid degan, kharashkuna waa ku dhow yahay lacag la'aan.
Onion batun wuxuu leeyahay dhadhan aad u fiican waana mid aad u faa'iido leh jirka bini'aadamka. In our dalkeena, basasha this koray oo loo isticmaalo ma aha oo kaliya in karinta, laakiin sidoo kale in daawada. Maqaalkani waxa aanu eegaynaa waxa uu yahay batun qaansada iyo codsigiisaba. Basasha-batun: Waxyaalaha kalooriga, halbeegyada iyo qiimaha nafaqada ee Tatarka, basasha ciidda, toonta aan uraysan, fistula - dhammaan magacyadaas waxaa loo yiraahdaa basasha batun.
Yuu jecel yahay in aad naftaada ku dhajisid basasha cagaaran oo qaali ah miiska cuntada. Gaar ahaan haddii aad adigu kor u qaadday. In this article waxaan ka wada hadli doonaa noocyada basasha-batun, ama halkii, on noocyada ugu wanaagsan. Baska-batun way ka duwan tahay guluubka caadiga ah ee height of caleemaha fistuq iyo la'aanta basasha. Basasha noocan oo kale ah waxaa lagu beeray si gaar ah loogu talagalay cagaarka.
Maxaa qurxin karaa saxan la yaqaan, waxay siiyaan muuqaal xarrago leh iyo ku dar kalluun yaryar oo ka fiican baalasha basasha cagaaran? Iyadoo ay ugu wacan tahay wax-soo-saarka beeraha (gudaha dalka, aqalka dhirta lagu koriyo, aqalka daaqa), badeecadaani waa la wada cuni karaa sanadka oo dhan, xitaa marka ilaha kale ee fitamiinada aan la heli karin.
Jacayl badani waxay u qabaan sababtoo ah khafiif, qandaraas iyo dhadhan macaan oo fudud, taas oo aan sabab u lahayn urka xun ka dib isticmaalka. Intaa waxaa dheer, cagaarka iyo basasha ma keenaan ilmo marka la jarjaray, marka loo eego basasha caadiga ah. Waa maxay mayot Sidaa daraadeed, waa maxay, waa maxay? Shallot waa warshad dilka ah ee qoyska basasha, guluubka kaas oo lagu ururiyo toon, taas oo u eg sida toon.
Basasha waa mid ka mid ah dalagyada ugu caansan ee koraan dhammaan beerta, iyada oo aan loo eegin aagga cimilada ama roobka. Ka dib markii la goosanayo dhibaatada badanaa waxay la timaadaa kaydinta basasha. Marka la eego dhibaatada alaabta la tuuray, milkiilayaashu waxay la yaaban yihiin: sidaa daraadeed sida si haboon loogu kaydiyo basasha si looga fogaado khasaaraha
Basasha waa mid ka mid ah beeraha ugu beerta ugu jecel. Wakhti kasta oo sanadka ah, waxay siin doontaa suxuunta dhadhanka tartiib tartiib tartiib ah, iyaga oo ku dhajiya fiitamiin iyo xubno raad. Laakiin si loo hubiyo in goosashada wanaagsan, xagaaga degganaha waa inuu ogaado sida loo quudiyo basasha. Ma taqaanaa? Cuntada caadiga ah ee adduunka - sida basasha.
Basasha - geedo daaqsin ah oo ka tirsan basasha qoyska. Dhirta dhuleed - Koonfurta Aasiya. Mid ka mid ah dalagyada khudradda ugu caansan. Waxaa loo adeegsadaa karinta, daawada, kiknoolajiyada. Ma taqaanaa? Masaaridii qadiimiga ahaa waxay ugu yeedheen basasha "geedka ilaahyada" waxayna ku qanacsan yihiin in adduunka oo dhan la dhisay ka dib markii tusaale ahaan basal badan oo badan.
Riyadii degganaha xagaaga iyo beerta xannaaneeyuhu waa hodanno dhadhan fiican leh. Oo sidee bay u dhibbanaan kartaa marka cayayaanka dalagyada beerta, khudaarta caleemaha iyo si yar u yareeya waxsoosaarkooda, waxay ku jiraan habka lagu gaari karo riyo. Badanaa waa inaad wakhti badan ku qaadataa oo aad ku dadaashaa inaad ka tirtirto cayayaanka dhibsado ee goobtaada, iyada oo la adeegsanayo habab kala duwan.
Chives, ama chives, ayaa caan loo yaqaan 'skoroda baska' - waa raad dhab ah ee ninkii beerta ka shaqaynayay. Waa mid aad u faa'iido badan, oo leh tiro badan oo ka mid ah guryaha dawooyinka, qurxinta goobta inta lagu jiro ubax, scares cayayaanka badan beeraha iyo beerta dhirta. Maqaalkani waxaad ku baran doontaa tayada waxtarka ee chives iyo nooca nooca ay tahay.
Talooyin ku saabsan sida ay u koraan basasha, faa'iido leh ee bannaanka u ah iyo bannaanka u, inkastoo ay dulsaar iyo milkiilayaasha faa'iido iyo khibrad leh. Basasha - khudradda aan mugdi ku jirin miiska. Waa suurtagal in la qiyaaso suxuunta aan isaga ahayn. Waxaa loo isticmaalaa cusub, la qalajiyey, loo isticmaalo in lagu sameeyo suugo, pickles, xawaash, ilaalin.
Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee basasha, meel gaar ah waxaa qabsadey qaansada slyzun, taas oo sidoo kale loo yaqaan mangyre, drooping, glandular. Waxaa la rumeysan yahay in magaciisa ugu weyn ee uu u helay xulashada firfircoon ee cabitaanka marka la jarayo dhirta. Waxay yiraahdaan waxay u egtahay ilmo. Waxay ku kori kartaa oo kaliya sida warshad beeraha ah ee beeraha khudradda, laakiin sidoo kale waxaa laga helaa duurjoogta carrada dhagaxda iyo cawska ee Eastern iyo Western Siberia.
Tirada iyo tayada dalagyada la goostay, iyo sidoo kale ilaa inta la kaydin doono, waxay ku xiran tahay inta badan goynta saxda ah ee basasha. Taasi waa waxa aan ka wada hadli doonno maqaalka. Marka qudaar laga saaro sariiraha Sida cagaarka ugu badan, basasha waa in la saaraa marka ay si buuxda u bislaadaan. Kaliya kiiskan, waxaan ku tirin karnaa ilaalinta dhadhanka iyo kaydinta muddada fog ee khudaarta.
Jardi-doedku ma sameyn karo basasha. Kala duwanaanshaha bandhigga waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan. Waxay keentay Holland. Ku soo dhawow dhadhanka wanaagsan, dhalidda iyo cabbirka weyn. Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa baska Exibishen iyo sii kordhinta ka soo abuurka ah qaab aan suuq ahayn. Tilmaamaha iyo sifooyinka Nalalka kala duwan ee noocaan ah waa kuwo aad u ballaaran, waxay gaari karaan qiyaasta 120 ilaa 400 g.
Muhiimadda weyn ee karinta, iyo sidoo kale daawada dad, waa caadiga ah iyo maalin kasta for dhammaan natiijooyinka beerista basasha iyo noocyo toon. Taasi waa sababta ninkii beerta ka shaqeeyaa ama dhirta cagaarka ah si tartiib ah ayey ugu koraan si ay u raali geliyaan naftooda iyo kuwa ay jecel yihiin maaha oo kaliya raashinka caafimaadka leh, laakiin sidoo kale qurxinta quruxda badan ee beerta ama xuduudda - waxaa kaloo jira noocyo lagu qurxiyo dhirta la cuni karo.
Dhaqsaha oo dhan bannaanka u ah dalka our koraan basasha on hal ama noocyo kale oo basasha. Mid ka mid ah noocyada ugu badan ee la jecel yahay ee geedkaan waa basasha Exibichene. Sida loo soosaaro noocan oo kale ah habka seedling dhirta ah waxaan ka wada hadli doonaa maqaalka. Tilmaamaha iyo Calaamadaha Foosto Badeecada waxaa lagu soo bandhigay dhulka dalkeena oo ka yimid Holland waxana ay muddo dheer ka caan baxeen dad badan oo ka mid ah dadka degaanka.
Basasha, kuwaas oo ku koray aaggooda, dukaanka aad u fiican. Laakiin waxa dhacaya haddii cimilada adag ee Siberia ma kuu ogolaanayso inaad hesho goosashada wanaagsan? In our article waxaan u sheegi doonaa dhowr sir ah oo ku saabsan sida loo abuuro iyo koraan basasha qoyska ee Siberia. Noocyada ugu fiican ee basasha Siberia Liiska noocyada ugu wanaagsan ee aaladaha basasha for Siberia: "Strigunovsky" - kala duwan tani waa Bisaylkiisa hore.